१ करोड रकम जित्त्दै राजीव जैन बने ‘को बन्छ करोड पति’ नेपालको बिजेता ! « Channel Np
१ करोड रकम जित्त्दै राजीव जैन बने ‘को बन्छ करोड पति’ नेपालको बिजेता !
प्रकाशित मिति : Sunday, May 12th, 2019 at 10:11 PM
काठमाडौं। एपीवान टेलिभिजनमा प्रशारण भइरहेको ‘को बन्छ करोडपति’को पहिलो शृंखलामा पहिलो शृंखलामा पहिलो करोड जित्ने शौभाग्य विरानटरका राजीव जैनले प्राप्त गरेका छन। उनले एक करोड रुपैयाँ जितेर यो फ्रेञ्चाइजमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएका छन् । राजीव जैनलाई ‘कुनै पनि नम्बर, मोबाइल नम्बर, कुनै तथ्यांक एक पटक भनेपछि पुग्छ ।
जैनले एक करोड जितेको कार्यक्रमको आधा भाग शनिबार प्रशारण भएको थियो भने बाँकी आज आइतबार एपीवान टेलिभिजनमा बेलुका प्रशारण गरिएको थियो। आजसम्मका सहभागीहरुले यति ठूलो रकम जित्न सकेका थिएनन् । तर जैनको अध्ययन र ज्ञानले यो सम्भव भएको कार्यक्रमका निर्देशक अमनप्रताप अधिकारी बताउँछन् । जैनमा भएको ज्ञानबारे निर्देशक अधिकारीले भने, ‘उनमा फोटोग्राफी मेमोरी रहेछ ।
यो यस्तो स्मरण शक्ति हो, जसले किताबको पन्ना हेरेकै भरमा उसको दिमागमा पन्नाकै फोटो बसिदिन्छ । मलाई जैनमा यहि विशेषता भएको लाग्छ।’ जैन परिवारसँग ३६ वर्षदेखि व्यापारमासँगसँगै रहेका मुरारी कोइरालाको बुझाइमा राजीवमा अद्भूत स्मरण शक्ति छ । कोइराला भन्छन्, ‘कुनै पनि नम्बर, मोबाइल नम्बर, कुनै तथ्यांक उसलाई एक पटक भने पछि पुग्छ । मैले कुनै बेला ‘ए राजीव यो नम्बर सम्झीराख है भन्यो भने उसको दिमागमा त्यो बसिरहन्छ । सोधेको बेला भनिदिन्छ । उसले नोट गरिराख्न पर्दैन ।’